သူနာပြု FOR ်ထမ်းခေါ်ယူမှု (ERES) ကြက်ခြေနီ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ် • ယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများ သူနာပြုတွေအတွက် "်ထမ်းခေါ်ယူမှု (ERES) ကြက်ခြေနီ
သူနာပြု FOR ်ထမ်းခေါ်ယူမှု (ERES) ကြက်ခြေနီ
Alejandroeb2စက်တင်ဘာလ 2019
တစ်ဦးက (တစ်ဦး) သူနာပြု (အေဒီ)
ယောဘသည်ခေါင်းစဉ်: သူနာပြု (အေဒီ)
သတင်းပို့လိုင်းများ: ASSISTANT ကျန်းမာရေး FIELD
အလုပ်တည်နေရာ: KOUSSERI, Logon AND ချာရီ - ဝေးလံမြောက်ပိုင်းဒေသ
မစ်ရှင်ကြာချိန်:5လ Fixed-သက်တမ်းစာချုပ်များ
ဆိုက်ရောက်၏ date: SEPTEMBRE 2019
ပလီကေးရှင်းများလက်ခံရရှိမှုအတွက်နောက်ဆုံးရက်: 13 / 09 / 2019 17h မှ
ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ (RFC) နှင့်ကင်မရွန်းကြက်ခြေနီ (စီအာစီ) အားနည်းချက်လူတွေကိုအကူအညီနှင့်အကူအညီများပေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအသင်းအဖွဲ့များ, လူထုအာဏာပိုင်များထံ auxiliary ဖြစ်ကြသည်။
2010 ကတည်းကပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ (RFC) အရှေ့များ၏ဒေသများတွင်အာဟာရနှင့်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (အတူတူပင်), ကနျြးမာရေး၏ဒေသများရှိကင်မရွန်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်သည်နှင့်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ဝေးမြောက်အမေရိက။
ဌာနချုပ်နယ်မြေဖို့ညှနျကွားခနှင့်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာလက်ထောက်၏ကြီးကြပ်မှုလက်အောက်တွင်နှင့်စီအာစီ-FRC အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းထဲမှာ, သူနာပြုများအတွက်တာဝန်ရှိရှိလိမ့်မည်:
အဆိုပါ CSI / CNAS, မူလတန်းကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (PHC ကို) နှင့်ကျန်းမာရေး) မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ (SR) တွင်စူးရှသောအာဟာရချို့တဲ့၏, ကြိုတင်ကာကွယ် curative, palliative နှင့်မြှင့်တင်ရေးထောက်ခံမှု၏ပြဋ္ဌာန်းချက်သေချာ
လူနာတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရပညာရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်၎င်းတို့၏ဆေးရုံနေနှင့်၎င်းတို့၏ output ကိုစဉ်အတွင်းသူတို့ကိုပါလာတဲ့သူတွေကို
1 ။ CSI / CNAS, မူလတန်းကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (PHC ကို) နှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေး (RH အ) တွင်စူးရှသောအာဟာရချို့တဲ့ဝန်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ် curative, palliative နှင့်မြှင့်တင်ရေးထွက်ပေါက်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်သေချာ
လူနာများ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပံ့ပိုးမှု CSI ဦးခေါင်းနှင့် / သို့မဟုတ် Kousseri နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နောက်ဆက်တွဲဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံ (တိုင်ပင်ဆွေးနွေး, လေ့လာရေးအောက်မှာလူနာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ခံအဆောက်အဦများအတွက်ဆေးရုံတင်;
CSI နှင့် / သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံများတွင်စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်: မူလတန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, အာဟာရချို့တဲ့မှု၏မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု,
သူတို့ရဲ့အခြေအနေမဆိုပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ဖြစ်ပျက်မှု detect နှင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်လူနာစောင့်စောင့်ကြည့်;
အာဟာရသွင်းအားစုများနှင့်ဆေးဝါးများ (စတော့ရှယ်ယာစောင့်ကြည့်မှု, ထိန်းချုပ်မှု, ... ) အတွက်ပံ့ပိုးမှုဝယ်ယူရေးစင်တာ;
လူနာများ၏ပိုကောင်းစောင့်ကြည့်မှုအားလုံးကိုမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုနောက်ဆက်တွဲဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံနှင့်အားလုံး CSI နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်
SEO ဆိုသည်မှာနှင့် SEO ဆိုသည်မှာ-ထိရောက်သောစိတ်ရှည်ဆန့်ကျင်သေချာ
2 ။ သူနာပြု၏တိုးတက်လာသောအရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်
Collegiate Acts နှင့်သဟဇာတအလုပ်လုပ်လေထုကိုအားပေးအားမြှောက်။
3 ။ ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရသူတို့ရဲ့ဆေးရုံနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းလူနာနှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများအဘို့ပညာရေးနှင့်သူတို့ရဲ့ output ကိုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်
ကောင်းသောကျန်းမာရေးနှင့်အကောင်းဆုံးအာဟာရများအတွက်မြှင့်တင်ရေးအလေ့အကျင့်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်လူနာ (ကျန်းကျန်းမာမာ, မျှတသောအစားအစာ, HIV ပိုး, မီးမဖွားမှီ, ကူညီပေးပို့, မိသားစုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ငှက်ဖျားတိုက်ဝမ်းရောဂါရောဂါများတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်, ... ) သင်ကြားပေးသည်။
4 ။ , စုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးအစီရင်ခံစာများ
အဆိုပါ CSI အဖွဲ့၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအာဟာရစောင့်ရှောက်မှုလှုပ်ရှားမှုများမူလတန်းကျန်းမာရေးနှင့်မျိုးပွားအပေါ်ဒေတာစုဆောင်းနှင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ,
ဒေတာစုဆောင်းခြင်း tools များ၏သငျ့လျြောသောအဆာကိုအထောက်အကူပြုရန်
ဒါဟာရံဖန်ရံခါယင်း၏ function ကိုဆက်စပ်သောတခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်း (င) ကိုမေးမြန်းပေမယ့်အတိအလင်းအလုပ်ဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းနိုင်ပါသည်
အသက်အရွယ် / လိင်: မသတ်မှတ်ရသေးပါ
ဆေးရုံနှင့် paediatrics အတွက်ပြင်းထန်စူးရှသောအာဟာရချို့တဲ့မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုအနည်းဆုံး2နှစ်ပေါင်းတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံရှိသည်
သည်းခံခြင်း, ပညာရေး, သံတမန်ရေးနှင့်အလိုက်အထိုက်နေတတ်။
ပြင်သစ်, Read, ရေးသားပြောပြီ, မသင်မနေရ
ဆေးရုံနှင့် paediatrics အတွက်ပြင်းထန်စူးရှသောအာဟာရချို့တဲ့မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နှစ်လိုဖွယ်သည်အခြား NGO များကအတွက်2နှစ်ပေါင်းကြိုတင်အတွေ့အကြုံကို
သံတမန်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်း၏ Sense သည်
ကြိုတင်အတှေ့အကွုံကနေတဆင့်လပ်ြရြားမြကြက်ခြေနီ / လခြမ်းနီ၏အသိပညာအမှန်တကယ်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်ဘာသာစကား၏ Excellent က command ကို; Fulfulde နှင့်အာရပ်၏အသိပညာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Applications ကိုပါဝင်သင့်
မွမ်းမံထားတဲ့ CV ကို;
လိုအပ်သောဒီပလိုမာ / ညီမျှ၏တစ်ဦးမိတ္တူ;
Maroua: ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ Sub-ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် DRSP (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့), C4 / IRD / CRF အဆောက်အဦးဘေးမှာ, Pitoaréခရိုင်မှာတည်ရှိပါတယ်ရုံးမှာအစောင့်မှအပ်ကြလိမ့်မည်
Yaounde: ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ 2005 631, rue Henri Dunant ကို BP Yaounde;
Batouri: ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ, STBK မျက်နှာ၏ Sub-ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့;
Kousseri: ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ Sub-ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့, ခရိုင်လူနေထိုင်ရာ 500m ICRC ရဲ့ရုံးတွေ
Ou မှာကိုစလှေတျ: recruitcrfyaounde@gmail.com
အဆိုပါဖိုင်များကိုစေလွှတ်ရပါမည် ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ Sub-ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မစ္စတာဌာနမှူး .
ပေးထားသောကျနော်တို့လက်ခံရရှိ applications များ၏နံပါတ်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦးချင်းတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 15 နေ့ရက်ကာလ၌သင့်ကိုငါတို့ထံမှသတင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ဒီတော့သင့်လျှောက်လွှာအောင်မြင်သောမဟုတ်ခဲ့ယူဆပါ။ မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ FIU ၏ဥပစာအပေါ်ကျောသူတို့ကိုရေးသားထားသောစမ်းသပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ မအောင်မြင် applications များကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှပြန်လာသောမည်မဟုတ်ပါ။
ဝေမျှမယ်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုဤ post ကိုပေးပို့!
်ထမ်းခေါ်ယူမှုအထူး 1500 လူငယ်များ၏လူငယ် THE NATIONAL Observatory